ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် ယူဆောင်လာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို က.ည.န မှ အသိပေး
$ Sell my Car
Dec 04, 2020 0
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများကို Online Booking စနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းများနှင့် ယူဆောင်လာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားပါသည်။
ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန၏ ကနဦး (နေပြည်တော်၊ ထောက်ကြံ့၊ ရွာသာကြီး နှင့် မန္တလေး) ရုံး (၄) ရုံး၏ ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို ပြန်လည်ဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် ပြည်သူများ အဆင်ပြေစေရေးနှင့် လူစုလူဝေးမဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ရက်ချိန်းရယူခြင်းအား Online Booking စနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်မည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် မိမိဆောင်ရွက်လိုသည့် နေ့ရက်ကို www.rtad.gov.mm website တွင် ၂၈.၁၁.၂၀၂၀ (စနေ) ရက်နေ့မှ စတင်ပြီး အနည်းဆုံး ၁ ရက်မှ အများဆုံး ရက် ၃၀ အထိ ကြိုတင်ရယူနိုင်ကြောင်း ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ အသိပေးကြေညာထားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုသို့လာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရယူထားသော သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လာရောက်ရန်နှင့် နောက်ကျပါက ရက်ချိန်းစာရင်းမှ အလိုအလျောက် ပယ်ဖျက်မည်။ လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးတွင် အများဆုံး လူ နှစ်ဦးသာ လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ Online Booking ရယူရာတွင် အမည်စာရင်းကြိုတင်ပေးပို့ထားသူသာ လာရောက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသက် ၆၀ နှစ်နှင့်အထက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ရောဂါအခံရှိသူများနှင့် ကလေးသူငယ်များအား ခေါ်ဆောင်လာခွင့်မပြုထားကြောင်းတို့ကိုလည်း အသိပေးကြေညာထားပါသည်။ ထို့အပြင် ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်း လာရောက်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ယူဆောင်လာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ ပြည်ပမှ တင်သွင်းယာဉ်များအတွက် သွင်းကုန်လိုင်စင်/ သွင်းကုန်ပါမစ်၊ ID (or) RON ၊ Custormer Statement နှင့် ယာဉ်ဓါတ်ပုံ ၊ လုပ်ငန်းလာရောက်ဆောင်ရွက်သူ၏ NRC ၊ Co.,ltd ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ တို့ ပါရှိရမည်ဖြစ်သည်။ အရောင်းပြခန်း ယာဉ်များအတွက် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ အရောင်းပြခန်းလက်မှတ်၊ ကြီး/ ကော် လက်မှတ်၊ ယာဉ် အို/ ဟောင်း အပ်နှံအစားထိုး ပုံစံ “ဃ” “စ” ၊ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ( Co.,Ltd လိုအပ်) တို့ ပါရှိရမည်ဖြစ်သည်။
SKD စနစ်ဖြင့် တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် ယာဉ်များအတွက် ပါရှိရမည့် စာရွက်စာတမ်းများမှာ Letter of Authorization ၊ QC Would be Signed by origin Co.,ltd ၊ MIC ခွင်ပြုချက် ၊ Both Our Inspectors (Engineers) ၊ VIN plate ၊ coA ,IC ၊ Delivery order ၊ ကုမ္ပဏီ/ ပိုင်ရှင် လျှောက်လွှာ နှင့် NRC တို့ပါရှရမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် တစ်ရက်လျှင် နေပြည်တော်ရုံးတွင် အစီး ၅၀၊ ရန်ကုန်- ထောက်ကြံ့ ရုံးတွင် အစီး ၁၄၀၊ ရန်ကုန်-ရွာသာကြီးရုံးတွင် အစီး ၅၀ နှင့် မန္တလေးရုံးတွင် ၈၀ စီး တို့ကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီးတွင် ကုန်တင်ယာဉ်များသွားလာခွင့်ကို ပြန်လည်ရပ်ဆိုင်း
MG ZS 2020 Review
ကားပြုပြင်တဲ့အခါမှာ မကြာခဏကြားနေရတဲ့ Relay ဆိုတာ ဘာလဲ? ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲ ?
၂၀၂၀ နဲ့ ၂၀၂၁ မှာ အထင်ကရလျှပ်စစ်ကားတွေ အပြိုင်အဆိုင်ထုတ်လုပ်ကြတဲ့ ကမ္ဘာကျော် ကားကုမ္ပဏီများ
More Guides Articles
Fast and Furious ကြောင့် လူကြိုက်များရေပန်းစားလာခဲ့တဲ့ ဂျပန်စူပါကားများ
Batmobile ကားတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ဈေးနှုန်းများ …
ကမ္ဘာကျော် UFC ဖိုက်တာများရဲ့ အမိုက်စားကားများ …
ကမ္ဘာ့အမြန်ဆုံးကား ဆယ်စီး …
ပထမကမ္ဘာစစ်နှင့် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြားက အလှဆုံးကားများ
ကမ္ဘာကျော်ကားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့် ဘောလုံးအသင်းများ၏ ဆက်စပ်မှု (၂)
ယနေ့ခေတ် ကားမောင်းသူတိုင်း မလုပ်မဖြစ် လုပ်ရမည့် အချက်ငါးချက်
Car ReviewsEntertainmentGuidesLatest News